Wedzera Mapeji paKushanya uye Deredza Bounce Rates | Martech Zone
Mugovera, March 20, 2010 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Zvinotaridza kuti mazhinji emakambani andakashanda navo anga aine kana vachiona mapeji pakushanya uye vachideredza mabhureki emitengo. Sezvo iri metric inozivikanwa zvakadaro, ini ndinoona makambani mazhinji achiisa zvibodzwa munzvimbo yevatungamiriri vavo vepamhepo ku kuvandudza ivo. Ini handikurudzire uye ini kazhinji handitarisise kuti yangu bounce mwero inodarika makumi masere muzana.
Zvichida maitiro anonakidza pane izvi zvandakaona vanhu vari kutyora mapeji avo kana mablog mablog kuitira kuti vanhu vatobaya chinongedzo kuti vaenderere kune rinotevera peji kuti vapedze kuverenga chinyorwa. Izvi zvakare zvakajairika nenzvimbo dzinobhadharwa nekushambadzira…. mamwe mapeji ekuona anogona kuenzana yakawanda mari uye mamwe ma ads ekuisa.
Chokwadi zvakakwana, iwo mapeji pakushanya anowedzera uye mabhureji emitengo anoderera - usambozvifunga kuti shanduko dzinodonha futi, zvakadaro, nekuti vaverengi vakashatirwa havagone kusvika kune izvo zvavaitsvaga.
Kana iwe uchida kuwedzera nemwoyo wose mapeji pakushanya uye kudzikisa bounce mitengo, ini ndinokurudzira zvinotevera:
Ita kuti peji rako rive nyore kuverenga! Nyora pithy, zvakanyanya-zvinomanikidza zvemukati zvinoshandisa misoro, misoro midiki, zvinyorwa zvine mabara, zvinyorwa zvine nhamba, uye mazwi akashinga zvinobudirira. Izvi zvinobvumidza vanhu kugaya yako posvo zviri nyore uye vozofunga kuti kana vasingadi kunyura mune zvimwe. Kumhara pane hofori peji rezvinyorwa inzira yemoto yekuita kuti vanhu vabhuye.
Ipa vashanyi vako dzimwe nzira! Perekedza zvako zvemukati ne zvine chekuita nazvo. Nekupa zvakabatana zvinoenderana, mapeji, kana kufona kuzviito pamwe nezvako zvemukati, urikupa zvimwe zvingasarudzika zvemuverengi wako pane kuita kuti zvidzore zvachose. ZveWordPress, ini ndinoshandisa iyo WordPress Inoenderana Zvinyorwa plugin. Izvo chaizvo chaizvo.
Ini pachangu, ndinotenda kuti bounce mitengo uye mapeji pakushanya ndeimwe metric isinganetsi yemabhizinesi kuyera yavo yepamhepo yekubudirira kubudirira pa. Kunze kwekunge iwe uchikwanisa kupa imwe mhando yekuenderana pakati pekushandurwa nekutarisa kwemapeji, nei iwe uine hanya kana vanhu vakawana yako saiti uye bounce? Pamwe vanga vasiri ivo vakarurama mushanyi? Zvichida yako saiti yakakwenenzverwa pane yakakwira yekutsvaga mhedzisiro yezita risina basa. Uri kuenda kunoranga yako yekutengesa timu kune izvo?
Sebhizinesi, webhusaiti yako kana blog inofanirwa kunge ichityaira zvitsva zvinotungamira, zvichibatsira kuchengetedza vatengi varipo, kana kubatsira kugadzira chiremera chako muindastiri yako (iyo inotyaira mitsva inotungamira uye inobatsira kuchengetedza vatengi). Shanduko inofanirwa kuve yako metric! Kwete Mapeji paKushanya kana Bounce Rates. Ndiri kufara kana vatengi vangu vakagara pane yangu saiti, tsvaga fomu rekubatana, uye bounce!
PS: Kana iwe uri webhu kuburitswa uye mari yako ichibva mukushambadzira mari, saka ungangoda kunetseka nezve bounce mitengo uye mapeji pakushanya nekuti anoita correlate zvakananga kune yako saiti mari. Ndiri kunyatsotaura nezve makambani nenzvimbo dzadzo, zvakadaro.
Tags: bounce rateswedzera mapeji pakushanyamapeji pakushanyakuderedza bounce rates
Usave wekushambadzira Malware akabatwa
Yakakura kuverenga, ndatenda nekugovana iyo Douglas!
Chinoita kuti nzvimbo dziwedzere kunakidza kuti dzigare kwenguva refu inyaya yekuziva zvavanoda uye nekugona kuzvipa zvirinyore sezvinobvira. Izvo zvinowedzera shanduko zvechokwadi! Izvo zvirinyore zvavakasvika ipapo, zviri nyore ivo vanowana izvo zvavari kutsvaga uye zvakanyanya ivo vanovimba newe paunotevera nguva!